Ukubonwa Kwesibhakabhaka ukusuka kumgangatho we-12, ipuli eseluphahleni kunye nejimu - I-Airbnb
Ukubonwa Kwesibhakabhaka ukusuka kumgangatho we-12, ipuli eseluphahleni kunye nejimu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguVerah
Iflethi okanye indlu ekwicomplex esembindini weKilimani enamagqabi, ekumgama wemizuzu emihlanu ukusuka kwiYaya Center nakwi-Adlife mall nemizuzu eyi-30 ukuya kwisikhululo seenqwelo-moya( kuxhomekeke kwizithuthi).
Umatrasi omfumamfuma okhululekileyo kakhulu kunye namashiti acocekileyo anebhalkoni yegumbi lokulala ejonge isibhakabhaka sesixeko nekhitshi elinento yonke. I-wifi ekhawulezayo kunye neendawo ezininzi zokupaka kunye nejenereyitha. Isakhiwo seflethi sineenkcukacha zokhuseleko ezifumaneka imini nobusuku, izinto ezisebenza ngokukhawuleza
Phola kwipuli eseluphahleni kunye nejimu
Yonwabela imiboniso oyithandayo kuNetflix nakuYoutube Channel. Le flethi okanye indlu ekwicomplex yale mihla enomoya otyhefayo ligumbi lokulala eliyi-1 elinemiphezulu yekhitshi ye-granite nendawo yokuphumla evulekileyo netofotofo.
Igumbi lokulala libethwa ngumoya ngebhedi enkulu etofotofo kakhulu, umatrasi owenziwe nge-orthopedic onezinto zebhedi ezicocekileyo nezicocekileyo. Yonwabela igumbi lethu lokuhlala elivulekileyo elinendawo yokutyela eyahlukileyo. Ikhitshi elinento yonke kunye nezinto zokupheka ezininzi ukuze wonwabele isidlo esenziwe ekhaya.
Isakhiwo seflethi sineenkcukacha zokhuseleko ezifumaneka imini nobusuku, i-CCTV kwiindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke kunye nenkqubo ye-intercom yokuzipholela iindwendwe uthe zava ekhayeni lakho. I-ell ixhotyiswe ngesantya esiphezulu sokuphakamisa
4.79 · Izimvo eziyi-56
Umbuki zindwendwe ngu- Verah
Ndifumaneka nangaliphi na ixesha incase of anything.Ukuba unayo nayiphi na ingcaciso okanye ufuna uncedo malunga nantoni na nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nam.